I-Kleshchevina - ikhula imbewu, lapho itshalwa izithombo, ukutshala nokunakekelwa
Ibhange le-Piggy labantu abapheka
Ingane futhi imnakekele
Cindezela mayelana nezinkanyezi
I-Encyclopaedia of Stars
Yehlisa isisindo ngemithetho
I-Kleshchevina - ekhula kusuka embewu, lapho itshalwa izithombo, imithetho eyisisekelo yokutshala
Lesi sitshalo esiphakeme sokuhlobisa sihlobisa imibhede eminingi yemifula kanye neziqephu, ukwethula inothi lokuklama ama-subtropical. Uthini umuthi we-castor ubukeka sengathi ukhula, uma uhlwanyela, ungayenza kanjani kahle, nokuthi unakekele kanjani isitshalo - sizokhuluma ngokuningiliziwe ngalokhu.
I-Kleshchevina - ikhula kusuka kumbewu
Isitshalo samafutha sogwaja sinjengomuthi wesundu - ubude, namaqabunga amakhulu afana nezihlahla ze-maple. Emabhokisini amancane, imbewu efana nobhontshisi, kodwa ehlukile kumaphethini amahle, afana nemidwebo yobuciko. Uma imbewu ivuthwa, amabhokisi ayomile. Kuleli phuzu, ungakwazi ukukhipha imbewu yokutshala okuzayo.
Njengoba isitshalo sezitshalo ezishisayo, izinsimbi ze-castor ezinjengelanga nokushisa, inhlabathi iyayithanda inhlabathi evulekile nelula. Ukuphishekela ukutshala kwalo, khumbula - lokhu isitshalo esinobuthi! Imbewu yakhe kuphela iyingozi empilweni - izinto eziyisikhombisa kuphela ezidliwe zingaba umthamo obulalayo wengane, futhi amabili - umuntu omdala.
Izinhlobo ezivame kakhulu zamafutha we-castor yizi:
Nini ukuhlwanyela amafutha we-castor ezitsheni?
Imbewu yamafutha e-castor ingahle itshalwe etshalwe enhlabathini, ngaphandle kokuxhaphazwa kwangaphambili, kodwa kulokhu, amahlumela ayobe esalinde isikhathi eside kakhulu, kanti imbewu eyishumi ayikhuli ngaphezu kuka-6-7. Enye indlela ukutshala ubhontshisi be-castor for izithombo ekhaya, ngokunye ukutshala izihlahla zibe emhlabathini ovulekile. Uma uhlwanyela amafutha we-castor ezitsheni - lokhu kungenye yemibuzo ebaluleke kakhulu. Isikhathi esihle sokutshala imbewu enhlabathini kungukuqala kuka-Ephreli.
Indlela yokukhulisa i-castor evela kumbewu?
Sitshele kakade ukuthi ukuhluma kwembewu yamafutha we-castor akuphelelanga. Ekhaya, kunamathuba amaningi okuhluma okuhle, kodwa hhayi okuningi. Ingabe kudingekile ukuba unciphise imbewu yamafutha we-castor ngaphambi kokutshala? Yebo, leli yilo phuzu, uma ufake imbewu yelanga lokugeleza emanzini ngobusuku obulodwa, kungenzeka ukuthi amanzi azowa ngaphansi kwegobolondo, futhi inqubo yokukhula izoqala. Le nqubo ibizwa ngokuthi i-stratification.
Ukuze sithume, sithatha amanzi ajwayelekile, futhi imvula noma i-thawed, igesi lokushisa. Amanzi akufanele abe amakhaza, yilalele. Beka imbewu emgodini wamanzi, kufanele ahlanganiswe ngokuphelele. Asikho isidingo sokudala izimo ezikhethekile, sivele siwashiye usuku, futhi ngosuku olulandelayo sibatshala emhlabathini.
Imfucumfucu yezinhlamvu ze-castor
I-scarification iyimonakalo yomshini kwigobolondo elinzima lembewu, kwenziwa ukuze umswakama ungene ngaphakathi kwenzalo, futhi inqubo yokukhula iqala. Le ndlela isetshenziselwa kabanzi ngezinhlobo eziningi zezihlahla nezihlahla. Ukukhishwa kwamafutha we-castor kwenziwa nge-sandpaper - imbewu kumele ihlutswe kahle. Lokhu kubhubhisa igobolondo elinzima futhi kuvumela umswakama obuningi ukungena ngaphakathi. Ngemuva kokukhathala, imbewu kumele ifakwe njengoba ichaziwe ngenhla, ngemuva kwalokho ingafakwa ngaphezu kwamanzi ngokukhula okukhulayo .
Kleshchevina ukutshala nokunakekelwa
Uma ukutshala kwamafutha we-castor okwenziwe ngezithombo kwenziwa ngendlela efanele, ngoJuni kufanele ube nezinhlanzi ezincane kodwa eziqinile ukulungele ukutshala endaweni evulekile. Ngaphambi kokutshala lesi sitshalo kumele kusetshenziswe amanzi amaningi izikhathi eziningi, ukuze yonke i-clod yomhlaba ifakwe kahle. Iqiniso liwukuthi, ngenxa yonke ukungathobeki kwalo, i-ore castor isaba kakhulu ukufakelwa kabusha - umonakalo omncane ezimpandeni ungayichitha, ngakho kufanele ikhishwe ngokucophelela.
Hlela kuqala umgodi emhlabathini, ukhiphe isitshalo ebhodweni kanye ne-clod yenhlabathi futhi, ngaphandle kokugubha umhlaba, uwubeke endaweni evulekile. Silala ne-castor emhlabeni, siyihlanganisela futhi sinamanzi ngokuningi. Uma uhlelo lwempande lungonakalisiwe, lesi sitshalo sishintsha ngokushesha. Isitshalo esidala ekunakekeleni asihloniphi futhi asidingi ukunakwa okukhulu.
Kuyini ukugcinwa kwe-castor-oli ekhulile kusuka emhlanjeni - ekususweni kokukhula kokhula okwesikhashana, okuqala ukuyivimbela ukuthi ingakhula. Kodwa ngisho le nkinga kulula ukuyixazulula kanye, ukumboza inhlabathi . Into kuphela okufanele ihlinzekwe ngamafutha we-castor engadini iyamisela njalo njalo.
Indlela yokutshala u-castor kusuka kumbewu?
Ake sicabangele okunye okuhlukile, njengoba isitshalo samafutha esitshalo sitshalwe imbewu, lapho sihlanyela emhlabathini ovulekile, nokuthi singayenza kanjani kahle. Hlela isikhathi - kufanele kube entwasahlobo efudumele, uma uqiniseka ukuthi ngeke kube khona ukupholisa. Lokhu kwenziwa eduze nangoMeyi. Ukutshala imbewu emhlabathini ovulekile akufani neze nemiyalelo yokuhlwanyela kahle amafutha we-castor ezitsheni - kusengaphambili kudingekile ukuwagcoba ngamaphepha emery, cwilisa emanzini usuku, emva nangemva kokugqugquzela ukukhula.
Imbewu yokutshala, cabanga ngokuhluma kwabo okuphansi. Emgodini ngamunye kuyadingeka ukubeka imbewu emibili emikhulu noma emaphakathi. Uma kuvela amaningana, ama-germs abuthakathaka angasuswa ngokushesha. Ukuze imbewu enhlabathini ingathinteki ukushisa, izinsuku zokuqala emva kokutshala, kufanelekile ukumboza izitshalo ngefilimu okungenani ubusuku.
Ngakanani ubuncane be-castor?
I-Kleshchevina, uma ikhulile evela emhlabathini ngqo, inyuke ngezikhathi ezihlukene, kuye ngokuthi nini yokutshala, ukuhambisana nemithetho yokulungiselela imbewu yokutshala, nokushisa kwe-air. Uma isimo sesimo sezulu sesifudumele, asikho isidingo esibandayo, futhi izinsuku zokuqala zokuhlwanyela zenziwa ngaphansi kwefilimu, ngakho-ke akunzima ukubona ukuthi zingaki izinyosi zezinyosi zezinsuku-ngokuvamile kuvamile izinsuku ezingu-7-10.
Uma ungazange uphuthukise imbewu, awuzange wenze inqubo ye-scarification, futhi usanda kubatshala emgodini, amahlumela azofanele alinde isikhathi esincane - ngaphambi kwamasonto amabili ayengeke avele. Izitshalo, ezisemhlabathini zibandayo kakhulu, zikhuphuka kakhulu, kanti amahlumela okuqala kufanele alinde cishe inyanga.
I-peony efana nomuthi - ukulungiselela ubusika
Ukulungiselela inhlabathi ebusika
Hedera - ukunakekelwa ekhaya
Sedum - ukutshala nokunakekelwa
Дроттянка - izindlela zokulwa
Impilo yengqondo yomuntu
Amahlumela asehlobo ephuma ku-flax
Ukulungisa ukulungiswa kwekhwalithi
Iphonsa ekhaleni izingane ezivela ku-0
Imodeli engu-53 ubudala u-El Macpherson wabulala abalandeli ngamafomu abo afanelekayo
Unganisela kanjani umuthi wemali?
Usuku lukazwelonke lwaseBelgium
I-clitoris ibuhlungu ngemva kokubeletha
Kungani iphupho liphupha?
Iqembu ngesitayela sezinhlupho
Shorts Women 2015
Unkulunkulukazi uNika - unkulunkulukazi ongumGreki wenzani?
I-mushroom Caviar ebusika
Buka kusuka ekuzizwa - umhlobiso weKhisimusi
Ama-Boot Tommy Hilfiger
Izitayela zekhanda ngakwesokunene
U-Emilia Clark noSam Claflin
I-Pita - iresiphi
Amajwabu ama-makeup angunaphakade
© 2021 zu.unistica.com